अवधारणा–पत्र – Advocacy Challenge Fund
अवधारणा–पत्र	admin	2016-09-11T07:41:40+00:00
अवधारणा–पत्र भनेको के हो ?
पैरवी चुनौती कोषमा निवेदन दिने प्रक्रियाको पहिलो कदमअवधारणा–पत्रहो । पैरवी चुनौती कोषमा निवेदन दिन चाहनेहरूले पहिले एक अवधारणा–पत्र पूरा गर्नुपर्दछ । अवधारणा–पत्रले निवेदकलाई संक्षिप्तरूपमा पैरवी चुनौती कोषले राखेको चुनौतीमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्ने अवसर दिन्छ । अवधारणा–पत्र भनेको प्रस्तावित परियोजनाको संक्षिप्त रूपरेखा हो । रकम वितरणबारे सबै निर्णय लिने पैरवी चुनौती कोष व्यवस्थापन समूहलाई प्रस्तावित परियोजनाको जानकारी दिन यो तयार गरिएको हुन्छ । यस चरणमा सफल भएका निवेदकहरू प्रतियोगिताको दोस्रो चरणमा पुग्छन् जहाँ कोषले उनीहरूलाई पैरवी चुनौती कोष व्यवस्थापकहरूबाट प्राप्त भएको स्वरूपमा विस्तृत निवेदन बुझाउनेछन् ।
कस्ता चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न जरुरी हुन्छ ?
तपाईंको प्रस्तावले यी चुनौतीहरूमध्ये एकलाई सम्बोधन गरेमा मात्र प्रतियोगिताको दोस्रो चरणमा प्रवेश पाउन योग्य हुन्छन्ः
• निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई क्षमता विकास गर्न मद्दत गर्नका निम्ति प्रयासहरू पहिचान गराउने । यसले गर्दा नीति तथा योजनाका विषयको खोजी, नीतिगत अवस्थाको विकास र सम्बन्धित अधिकारीलाई नीतिगत प्रस्ताव प्रोत्साहन गर्न र आफ्ना सदस्यहरूका चाहनाबारे जागरुक भएर पैरवी गर्न सक्षम बनाउनेछ ।
• निजी क्षेत्रका संस्थाका संस्थागत, शासन र व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धि गर्ने । यसले उनीहरूलाई प्रभावकारीरूपमा पैरवीका क्रियाकलाप अवलम्बन गर्न र आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बन्नका निम्ति रणनीति विकास तथा कार्यान्वयन गर्न सक्षम बनाउँछ ।
• अधिकार र दबाबपूर्णशासनका विषयका साथमा जिम्मेवार व्यापारको महत्वका बारेमा जनचेतना वृद्धि गर्न प्रयास गर्ने
कस्तो स्वरूप अपनाउनुपर्छ ?
तपाईंले आफ्ना जानकारी तलका हरेक प्रश्नमुनि भएका कोष्ठकमा उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ । यो फाराम नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा भर्न सकिन्छ । यो फाराम आठ पानाभन्दा लामो हुनुहुँदैन ।
यो अवधारणा टिपोट बुझाउने अन्तिम मिति कुन हो ?
यस अवस्थामा तपाईंको निवेदन प्राप्त हुनुपर्ने अन्तिम मिति .. .. २०७२ हो ।
यो मिति र समयपश्चात् प्राप्त भएको कुनैपनि निवेदन मान्य हुनेछैन ।
तपाईंलाई आफ्नो अवधारणा–पत्रपूरा गर्नुपूर्व र अन्तिम मितिअघि नै कोष व्यवस्थापकसँग आफ्नो अपेक्षित निवेदन दर्ता गर्ने मितिबारेमा छलफल गरी आफ्ना विचार सही तरिकाले र पूर्ण रूपले राखिएको सुनिश्चित गर्न सल्लाह दिइएको छ ।
अवधारणा–पत्र बुझाउने तरिकाः
पैरवी चुनौती कोष का निम्ति अवधारणा टिपोट मिति ……÷……….÷…… देखि ……÷……….÷…… सम्ममा लिइनेछ । निवेदनहरू प्राप्त भएपश्चात् यिनीहरूको जाँच सुरु गरिन्छ ।
निवेदकहरूले अवधारणा–पत्रको सफ्ट कपीफाराम (Soft Copy Form)MS-Word मा हुनुपर्नेछ ईमेलः acf@ilo.org मा पठाउनुपर्छ र हस्ताक्षरका साथ खामबन्दी गरेर आईएलओ (ILO) को कार्यालयमा हार्डकपि (Hard Copy) बुझाउनुपर्छ ।
निवेदकहरूले आफ्ना अवधारणा–पत्र अंग्रेजी भाषामा A-4 साईजको पानामा Single Space मा Times New Roman को Font Size- 12 अन्य कागजातका साथमा बुझाउनुपर्छ ।
अन्य जानकारीका लागि कृपया acf@ilo.org मा ईमेल पठाउनुहोस् ।
कोष व्यवस्थापकले मूल्यांकन परिधिअन्तर्गत अवधारणा–पत्रको छनौट गर्र्नेछन् । सबै आवेदन दर्ता गराएकालाई प्रबन्धकले नतिजा पठाउनेछन् र दोस्रो चरणमा (विस्तृत निवेदन) पुग्न सफल भएका निवेदकलाई पनि खबर गर्नेछन् ।